Apple Oo Daaha Ka Qaaday Wajiyaal Cusub Oo Kibirka 2022 iyo Qaybaha Apple Watch | IPhone News
Apple waxay soo bandhigtay wajiyo cusub oo Pride Edition 2022 ah iyo xargaha Apple Watch
May 17, waxaa la xusay maalinta caalamiga ah ee ka dhanka ah nin nacaybka, nacaybka iyo nacaybka. Ka faa'iidaysiga munaasabadda, sida Apple ayaa samaynaysay sanadihii la soo dhaafay, Xargaha daabacaadda gaarka ah iyo wejiyada ayaa loo soo bandhigay Apple Watch. Ficilkan ayaa ah mid kale oo riixaya shirkad weyn sida Apple si ay isugu daydo inay taageerto bulshada LGBT. Sannadkan daabacaadda Kibirka ayaa leh laba xadhig oo cusub iyo garaac cusub saacada. Sida ugu cusub, waxaanu iftiiminaynaa in 2022-kan labada xadhig la soo bandhigay halkii mid iyo mid ka mid ah laga soo xigtay daabacaadda Nike.
1 Kuwani waa xargaha daabacaadda cusub ee Kibirka ee Apple Watch
2 Laga bilaabo maanta waxaa laga heli karaa dukaanka Apple Online
Kuwani waa xargaha daabacaadda cusub ee Kibirka ee Apple Watch
Todobaad ka dib sidii caadiga ahayd Apple waxa ay soo bandhigtay guutooyinkiisa Apple Watch ee hoos yimaada Daabacaada Pride 2022. Waxaan dhahnaa soo daah sababtoo ah Apple-ga Weyn wuxuu inta badan bilaabaa ololahan maalmaha muhiimka ah. Munaasabadan, 17-ka May waa maalinta caalamiga ah ee ka-hortagga nin nacaybka, nacaybka iyo nacaybka laba-la'aanta, taariikhdan ayaa loo isticmaali jiray ku dhawaaqista. Si kastaba ha ahaatee, ilaa dhowr daqiiqo ka hor ma hayno macluumaad ku saabsan suumanka gaarka ah ee sanadkan iyo garaacyada.
Laakiin ugu dambeyntii way nala joogaan. Apple waxay go'aansatay inay soo saarto laba xargo halkii ay ka ahaan lahayd mid sidii aan u isticmaalnay hoosta daabacaadda Kibirka. The hordhac iyaga ka mid ah waa Xarig Loop Sport, iyadoo qiimaheedu yahay 49 euro, wuxuu leeyahay a gradient oo isku dara calanka Kibirka oo leh shan midab oo cusub:
Dhanka kale, brown iyo madow waxay u taagan yihiin LGBTQ+ dadka midabka leh ee la takooray, iyo sidoo kale kuwa la nool ama la noolaa HIV iyo AIDS. Iyo, dhanka kale, buluugga khafiifka ah, casaanka iyo caddaanka ah ayaa abaal-marin u ah labada qof ee trans iyo kuwa aan aqoonsan jinsiga kasta.
Dhanka kale, waxaan leenahay sida cusub mid cusub Nike Sport Loop oo leh maro naylon ah oo ay dhiirigelisay BeTrue, oo ah hindise Nike oo door bideysa sinnaanta adduunka ciyaaraha. Si aad u xidhato xarkaha isku midka ah ee Daabacaadda Kibirka Apple ayaa sidoo kale soo bandhigtay waji cusub oo ay ku xuseyso maalinta. Suunkaan waxaa lagu qiimeeyaa 49 euro sidoo kale.
Laga bilaabo maanta waxaa laga heli karaa dukaanka Apple Online
Intaa waxaa dheer, sharraxaadda qalabka cusub ayaa si gaar ah looga faallooday Taageerada maaliyadeed ee Apple ay siiso ururada kor u qaada xuquuqda LGTBQ+ wadareed oo ay ka shaqeeyaan isbeddel wanaagsan, oo ay ku jiraan: Encircle, Institute Equality Federation, Equality North Carolina, Equality Texas, Gender Spectrum, GLSEN, Ololaha Xuquuqda Aadanaha, PFLAG, Xarunta Qaranka ee Sinaanta Jinsiga, SMYAL, Mashruuca Trevor iyo ILGA World.
xargahaan hadda waa laga heli karaa dukaanka Apple Online laakiin aan weli ku jirin dukaamada jirka. Dukaamada jirka waxaan ka iibsan karnaa laga bilaabo Maajo 26, Khamiistan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Apple waxay soo bandhigtay wajiyo cusub oo Pride Edition 2022 ah iyo xargaha Apple Watch
Ugu dambeyntii!: Apple Music waxaa lagu dhex daray ciyaaryahan ahaan Waze
Diiwaangelinta cusub ee FCC waxay ka hadlaysaa adabtarada shabakadda ee suurtogalka ah ee iOS